Ny varimbazaha - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-02 > Ny varimbazaha varimbazaha
Amin'ny fahavaratra izany. Nivezivezy teny amin'ny tanimbary midadasika ny masoko. Mamitsaka ao anaty hazavana mafana ny spike ary ho vonona amin'ny fijinjana. Miandry amim-paharetana ny mpamboly mandra-pahatongan'ny fijinjana ny vokatra.
Raha nandeha namaky ny tanim-bary i Jesosy sy ny mpianany, dia nioty salohim-bary ka nototofany teny an-tanany ary nahavoky ny noana indrindra tamin’ny voa. Mahavariana ny vitan’ny voa vitsivitsy! Tatỳ aoriana, dia hoy i Jesosy tamin’ny apostoly: “Be ny vokatra, fa ny mpiasa no vitsy.” ( Matio 9,37 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Ianao, ry mpamaky malala, izahao ny zaridainako ary fantaro fa fijinjana lehibe no miandry, izay mifandray be dia be amin'ny asa. Mamporisika anao hino aho fa mpiasa mahay amin'ny fijinjana Andriamanitra ary miaraka amin'izany ianao dia tafiditra ao anatin'ny vokatra. Manana fahafahana hivavaka ho an'ny mpiasa sy ny fahombiazana ianao ary manompo ny tenanao. Raha tianao an'i Fokus Jesosy, dia omeo amin'ny olona liana izany na mandoa famandrihana. Amin'ity fomba ity dia afaka mandray anjara amin'ny fahafinaretana izy izay manentana anao. Ataovy amin'ny asan'ny fitiavana tsy misy fepetra ny asanao ary araho ny dian'i Jesosy. Jesosy, ilay mofo velona avy any an-danitra, dia manome fahafaham-po ny hanoan'ny olona tsy manan-mofo.
Ny mpamboly no tompon'ny vokatra manontolo ary mamaritra ny fotoana mety. Ny voam-bary iray - azontsika ampitahaina amin'izany - latsaka amin'ny tany ary maty. Tsy tapitra anefa izany. Avy amin'ny voa iray no misy salohim-bary vaovao mamoa be. «Izay tia ny ainy dia mahavery izany; ary izay mankahala ny ainy amin’izao tontolo izao dia hiaro izany ho amin’ny fiainana mandrakizay » (Jaona 12,25).
Amin'izany fomba fijery izany dia azo antoka fa aleoko mijery an'i Jesosy, izay nanambara anao mialoha ny fahafatesana. Miaraka amin'ny fitsanganany amin'ny maty dia omeny anao ny fiainana vaovao ao amin'ny fahasoavany.
Vao haingana izahay no nankalaza ny Pentekosta, ny fetin'ny fijinjana voalohany. Ity fankalazana ity dia manaporofo ny firotsahan'ny Fanahy Masina amin'ny mpino. Androany, tahaka ny lehilahy sy vehivavy tamin'izany fotoana izany, dia afaka manambara isika fa ny olona rehetra mino an'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty, ilay Zanak'Andriamanitra, amin'ny maha-Mpanavotra azy, dia ao anatin'ity vokatra voalohany ity.